Yunaayitid Isteetis Koolu Galtoota Meeksikoo Gara Biyyaatti Deebisamuun Jalaqabame
Muddee 09, 2021
Koolu Galtoota Meeksikoo Gara Biyyaatti Deebisamuun Jalaqabame
Akka imaammata “Meeksiikoo keessa” jedhutti, angawoonni Yunaayitid Isteetis koolu galtoota jalqabaa lama kaleessa gara Meeksikootti deebisanii jiran.
Imaammati bara bulchiinsa Traamp, kanneen dadhata siyaasaa gaafatan dhimmi isaanii hanga mana murtii immigireeshinii Yunaayitid Isteetisiin ilaalamutti Meeksikoo keessa akka turan ajaja. Jarmayaan koolu galtoota addunyaa kan tokkummaa mootummootaa akka jedhetti koolu gltoonni lamaan Meeksikootti kan ergaman karaa riqicha Ciudad Juarez daangaa El Paso, Texas ce’uu dhaani. Lammummaa namoota kana lamaanii jaarmiyichi tokkummaa mootummootaa ifa hin taasisne.
Lamaanuu galmee isaanii kan itti dhiyeessan angawoota Meeksikoon simatamaniiru. Angawoonni tokkummaa mootummootaas qorannaa vaayiresii koronaa kan godhaniif yoo ta’u gara qubsuma keessa turanitti geessaniiru. Meeksiikoon akka jettetti, akka sagantaa kanaatti mootummaan Yunaayitid Isteetis koolu galtoota biyyatti deebifaman maraaf talaallii ni kennaaf.
Bulchiinsi prezidaant Joo Baayiden ajaja mana murtii kabajuuf jecha wixata darbe imaammata sana bakka isaatti kan deebiseef jijjiiramaa fi gaaffii dabalataa meeksikoon gaafatteen walii galuuf jecha.
Koolu galtoota kana biyyatti deebisuun karoorfamee kan ture El Paso irraa guyyaatti koolu galtoonni 50 gara Ciudad Juareztti akka deebifaman ta’uu angawaan Yunaayitid Isteetis tokko beeksisaniiru.
Ministriin nageenya biyyaa koolu galtoonni kun deebisamuu mirkaneessuu dhaan, bakka tokkotti kan jalqabe yoo ta’u, naannolee biroo ja’attis babal’atuuf akka jiru beeksise. Magaalaa isa kam irraa ykn koolu galtoonni meeqa akka deebisaman garuu sababaa hojii nageenyaaf jecha ibsuu irraa of qusatee jira.